(Last Nohavaozina: 16/01/2020)
Sarotra ny misafidy ihany 5 Easy nivezivezy Day By Train From Milan mba hizara aminareo. Italia lamaody capital no Marevaka amin'ny safidy ho an'ny mpizaha tany ny mitsidika. Tsy vitan'ny no feno lamaody, saingy manana tantara tsy mampino, trano sy tsara tarehy toerana manodidina to write home about.
Ny voalohany Easy Day Trip avy Milan Italia fahatelo dia ny farihy lehibe indrindra ny andro lamasinina, sy hiaina ny mirentirenty Cruise manodidina ny rano. Inona no fomba tsara mba hiaina ny manaitra Alpine toerana manodidina avy amin'ny tsipìka ny sambo, ary koa ny mahazo ny fahafahana handray Nisy nanakorontana mangingina pijery amin'ny fananana akaiky rano tsara tarehy ao amin'ny morontsiraka.
Mety ho gaga ianao hahafantatra fa Soisa fotsiny andro iray lavitra miala Italia renivohitra. Hop amin'ny Bernina Express avy Tirano ary ianao kosa ho any amin'ny roa ora sy sasany.
Ianao dia hiafara ao amin'ny tanànan'i St Soisa. Moritz, Soisa iray amin'ireo tendrombohitra malaza indrindra Resorts. This is where the rich and famous spend their holidays or own a chalet.
St. Moritz tonga lafatra manao fototra mba hijery ny atsimo ny, ao amin'ny Graubunden. Tsy tsara ho an'ny andro tena ratsy fitsangatsanganana any amin'ny faritra hafa any Soisa, toy izay ho be loatra Travel fotoana. ny, na izany aza, iray amin'ireo ambony 5 Trips Day By Train From Milan aza! Ankoatra ny Nightlife in tanàna, ny tena asa atao eto dia any an-tokotany. Raha tianao tongotra lavitra, bisikileta na ririnina fanatanjahan-tena, dia afaka mifalia nandritra ny herinandro maromaro amin'ny faritra manaitra ity.
Mitaingina ny funicular avy any ambany ho any an-tampon-tanàna, ary hojerentsika Bergamos tsangambato manan-danja, toy ny St. Maria Maggiore Cathedral sy ny Colleoni Chapel.
Last, fa tsy ny kely indrindra, aza adino ny maka fotoana mba hankasitraka Bergamo tsy mampino manodidina, amin'ny havoana mamelatra ny kilaometatra, ny lalana rehetra nidina ho any lavitra Lake Como.
Ny faritra Franciacorta manome mahatalanjona sasany, nahazo loka divay ho anareo ny santionany, tao am-pony kanto italiana toerana manodidina.
Ny Franciacorta DOCG faritra dia ahitana ny momba ny 3,000 hektara ny voaloboka mandrakotra mahagaga ny sasany Toerana mahafinaritra fotsiny Rolling faritra atsimon'i Lake Iseo in Italys faritra Lombardy. Izany no ao anatin'ny halavirana ny rora ny maro hafa malaza Italiana divay faritra, toy ny Piedmont any andrefana sy Conegliano Valdobbiadene (an-trano ny Super Premium Prosecco) to the east.
Io toerana voalohany mahatonga Franciacorta toerana tonga lafatra ho an'ny tantaram-pitiavana tsara getaway na divay mendrika diany, hamandrika ora fotsiny avy any Milan, it is accessible and beautiful in equal measure.
Ny lisitry ny 5 Trips Day By Train From Milan, dia tsy ho tanteraka raha tsy anisan'izany Venice! Inona no mety ho tsara kokoa noho ny naka ny andro diany avy any Milan ny iray amin'ireo tantaram-pitiavana Italia tena tian'ny tanàna, Venice? Na dia sarotra ny hifanaraka Venise mahafinaritra rehetra ho iray andro, dia afaka tokoa ny manandrana.
Dia azo antoka fa azon'ody Mety tsara ny mamirapiratra Lagoon. Ankafizo ny trano mahafinaritra iray izay mampiavaka Italia tanàna malaza indrindra ho an'ny mpizaha tany.
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “5 Easy nivezivezy Day By Train From Milan” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://embed.ly/code?url = ny https://www.saveatrain.com/blog/day-trips-milan-train/ ‎- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Bergamo comolake Daytrips EuropeByTrain Milano Train Travel fiaran-dalamby Travel torohevitra travelvenice